अवैध डाक्टरकाे अखाडा नेपाल, कहाँ छ सरकार ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अवैध डाक्टरकाे अखाडा नेपाल, कहाँ छ सरकार ?
अवैध डाक्टरकाे अखाडा नेपाल, कहाँ छ सरकार ?
माघ १७ गते, २०७४ - १६:३८
काठमाडौ । अवैध रुपमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका १७ जना नक्कली डाक्टरलाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतकाका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलाशले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेकाे हाे । गत सोमबार प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा छापा मारेर ती नक्कली डाक्टरलाइ गिरफतार गरेकाे हाे ।
ती नक्कली डाक्डरहरूले भ्रम छरेर डाक्टरकाे भेषमा अवैध रुपमा काम गरिरहेका थिए । नक्कली डाक्टर बन्नेहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चीनका नागरिक पक्राउ परेका हुन।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पहलमा सिआइबीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हाे। राजधानीको ठमेलस्थित एपोलो इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक, बौद्धस्थित चाइना ग्रेटवाल हेल्थ सेन्टर, सिविक हस्पिटल ट्राभल मेडिसिन सेन्टर, चाइना पिपुल्स हस्पिटल, चाइनिज डेन्टल हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा काम गरिरहेका उनीहरु पक्राउ परेका हुन ।
विदेशी डाक्टरले नेपालमा अभ्यास गर्न मेडिकल काउन्सिलको अनुमती लिनुपर्छ। तर तिनीहरु कसैले पनि मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमती लिएका छैनन्। ठगी मुद्धामा अनुसन्धान गर्नका लागि उनीहरुको म्याद थप गरिएको बताइएको छ ।
माघ १७ गते, २०७४ - १६:३८ मा प्रकाशित